Okwamanje, abantu abanezinkinga umbono kungase kudingeke uwuyeke izibuko. Abaningi babo namahloni, ngoba le mfanelo kakhulu muva phathelana ibhekwa njengento esemfashinini futhi stylish. Futhi ngaphambi osemusha waphoqeleka ukugqoka izibuko, kungenziwa isandla chwaneka ontanga. Ngenhlanhla, phakathi nekhulu lama-20 zasakazekela lens contact. Ziyakwazi ukhululekile, hhayi uyakwazi ukudala umonakalo, ake ubone kahle ngaphandle izinguquko ezinkulu ukubukeka. Yilokho nje indlela ukugqoka lens? Lo magazini kuyinto ekhathaza abaningi.
Idinga kuyikhono ezithile. Uma ubhekene contact lens okokuqala, ke kungokwemvelo ukuthi uyozizwa umuzwa wokwesaba - hhayi ukuthi iso emibi. Futhi indlela agqoke lens, uma umzamo wokuqala, wakhipha ibuyisele uvala? It kuvela udinga umkhuba kancane. Kancane kancane ukuthuthukisa amakhono. Ungenza lokhu inqubo nsukuzonke ngaphandle kwezinkinga. Umbuzo uwukuthi indlela agqoke lens, uzoyeka okukhathazayo.
Uma "newbie" kuleli cala, sebenzisa amanye amathiphu.
Musa ukugqoka lens ku iso, okuyinto "bengalali ngokwanele." Ngakho kungaba avuse ukucasuka. Ngenxa nokungalali yokuthi amaphaphu emehlweni inyuka, kukhona amajaqamba umuzwa.
Qaphela: Uma ufuna ukwazi impendulo efanele umbuzo kanjani ukuba agqoke lens, akufanele ukudida kubo. Lokhu kusebenza ngisho nasezimweni lapho banabo diopter efanayo. Kufanele wenze kube umthetho: ukususa lens, kusukela, isibonelo, ubeke ilihlo kwesokudla, bese ubeka nabo iziqukathi ezifanele.
Uma ungazi indlela ukugqoka contact lens, kungcono ukwenza lokhu ngosizo umunwe index. Bona babe ezibekwe phezu ithiphu pads yakhe. Kumele uqiniseke ukuthi lens ayizange ngaphandle. Uma kuwukuthi "kwesokudla", ke kuyodingeka umumo isitsha, zihlangene emaceleni ayo iphuzu up. Manje abanye abakhiqizi ilebula imikhiqizo yabo, ungakwazi kalula ukuthola okuyinto uhlangothi kwangaphakathi futhi siyini yangaphandle.
Ngaphambi ukubeka lens iso, kufanele bahlolisise yona khona izinwele, Lint, uthuli. Bona obulimaza yeso.
Ihlanzekile futhi yomile izandla zakho - isifungo sokuthi ukugqoka lens efanele, futhi musa avuse iyiphi imiphumela engemihle.
Manje singaxoxa mayelana nobuchwepheshe. Indlela ukugqoka contact lens? Ungenza ngezandla ezimbili, noma eyodwa kuphela. Kulo mBhalo, kufanele donsa ephansi ijwabu leso kwesokudla umunwe phakathi. Ngemva kwalokho isethi ukumbheka. I-lens lisetshenzisiwe ingxenye elimhlophe yeso, kancane ngezansi umfundi. Manje ungasusa umunwe index, lapho kugcinwa kakhulu kuyi-lens, futhi ukuhumushela umbono phansi. Njengoba nje esunguliwe maphakathi iso (uzizwa ke), kuzomele ukuyidlulisa isivalo ephansi, blink izikhathi ezimbalwa kancane. Ngemuva kokuthi uqinisekise ukuthi akukho umuzwa ukungakhululeki, ungakwazi bathuthele iso kwesokunxele, ngokwakho konke amaphuzu abalwe ngenhla.
Ngokuvamile, i-lens kulula ukuthatha isikhundla oyifunayo, okungukuthi esikhungweni cornea. Kodwa kunezimo lapho nazo ezilahlekelwe. Uyobona ukuthi lokhu kuye kwenzeka, uma uzwa ukungakhululeki, isithombe kungase lifiphale. Uyoba kalula ukubhekana nale nkinga. Vele vala amehlo akho, bese kamnandi a motion isiyingi ukumbhucunga ijwabu leso.
Susa lens, ngenhlanhla, kulula kakhulu ukuba azembathe. Udinga ukudonsa ijwabu leso engezansi (kwesokudla) ne umunwe phakathi, bese Inkomba ukunamathisela onqenqemeni engezansi lens uqobo. Shelelisela kancane eceleni. Manje, i-lens kungenziwa aboshezelwa phakathi isithupha ne forefinger futhi ukuyikhipha esweni.
Ayikho into elukhuni, njengoba ungabona, akukho. Udinga nje umkhuba. Uzoba ngokushesha baqonde indlela agqoke lens.
Ukuhlola izifo zocansi: amasu eziyisisekelo
The ephansi kwengcindezi ngokushesha nangempumelelo?
LDL cholesterol luyanda: indlela yokunciphisa futhi lokho kuyinto ejwayelekile?
Wena streptoderma - indlela yokuphatha
Nenkabazwe Ukhonkolo phezu endleleni - isiqinisekiso yokupaka efanele izimoto
Lezi izincomo elahlukile amadoda
Arseny Logashov: umlando womvikeli waseRussia